Videos uploaded by user “Mohd Araf”
After 09 October 2016 burn alive innocent rohingya old man by Myanmar security forces and Myanmar ar
Submitted by mohammad arawf in makkah saudi arabia
Views: 36 Mohd Araf
Against of ROHINGYA MYANMAR terrorist army and hindu(1)
Views: 24 Mohd Araf
Views: 11 Mohd Araf
Arawf touching Baitullah Or Qabaa
13 Ramadan 1439 Monday 28.5.2018 Monday ဒီနေ့ရမ်ဇန်လရဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ည 10:30 PM အချိန်တွင် Tawaaf ပတ်နေတာ အရမ်းပျော်တယ် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ကဟ်ဗဟ် ကိုကိုင်ရနိုင်လိုပါ အမှတ်တရ အွမ္မရာဟ် ပါ
Views:7Mohd Araf
After performed umrah out from masjid al haram
28.5.2018 Monday 13 Ramadan 1439 performed umrah
Views:5Mohd Araf
Arawf performed umrah 2018
အွမ္မရာဟ် လုပ်ပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာနေတယ် အမှတ်တရ လေးတွေပါ 28.5.2018 Monday 13 Ramadan 1439
Views: 10 Mohd Araf
At Tawab arawf
28.5.2018 Monday performed umrah 13 Ramadan 1439
Views:4Mohd Araf
Md Arawf (Umrah) performed 2018
Alhamdulillah today's I was performed Or umrah 13 Ramadan 1439-Monday 28.5.2018 Monday I,was started Umrah 10:30 PM. I'm very happy for touching my dear Qabaa Or Baitullah this is my memorial day.
From myanmar maungdaw township
Views: 32 Mohd Araf
Md arawf ဇင်ပိုင်ညာအုပ်စု၊ကျွဲထားပြင်ရွာ(2)
Views:2Mohd Araf
Against of ROHINGYA MYANMAR terrorist army and hindu(2)
Views: 12 Mohd Araf
Views: 18 Mohd Araf
Ajita rohingya young girl myanmar terrorist army gun shot while her escape(2)
Md arawf ဇင်ပိုင်ညာအုပ်စု၊ကျွဲထားပြင်ရွာ(1)
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးကို ဘင်္ဂလားဒေဂ်ျ့ ရဲတွေကမုဒိန်းကျင့်တာ ရိုက်တာ သူမရဲ့တစ်ရက်စာကလေးတစ်ယောက်ကိုပျောက်
2 july 2017 bangaldesh leda new refugee camp မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ
Md arawf ဇင်ပိုင်ညာအုပ်စု၊ကျွဲထားပြင်ရွာ(3)
Views:3Mohd Araf
Ajita rohingya young girl myanmar terrorist army gun shot while her escape(1)
Views:6Mohd Araf
Dorabill burnt down 2017 (ကျွဲထားပြင်ရွာ)(2)
13/09/2017 Wednesday 04:25 PM မြန်မာ့စစ်တပ်များနဲ့ ရခိုင်အစွန်းရောက်များတို့က အင်အား ၅၀ နည်းပါးလောက်ရောက်လာပြီး ကျွဲထားပြင်ရွာကို တစ်အိမ်မကျန်မီးရှီု့လိုက်ပါတယ်..By-mohammad arawf in makkah saudi arabia
Md arawf ဇင်ပိုင်ညာအုပ်စု၊ကျွဲထားပြင်ရွာ(4)
Dorabill burn 2017 (ကျွဲထားပြင်ရွာ)(3)
13/09/2017 Wednesday 04:25 PM မြန်မာ့စစ်တပ်များနဲ့ ရခိုင်အစွန်းရောက်များတို့က အင်အား ၅၀ နည်းပါးလောက်ရောက်လာပြီး ကျွဲထားပြင်ရွာကို တစ်အိမ်မကျန်မီးရှီု့လိုက်ပါတယ်...ရေးသူ မုဟမ္မဒ် အာရော(ဖ့်) ကျွဲထားပြင်ရွာနေ... ခေတ္တ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ မက္ကာမြို့...MOHAMMAD ARAWF LIVING IN MAKKAH SAUDI ARABIA
Views: 15 Mohd Araf
13/09/2017 Wednesday 04:25 PM မြန်မာ့စစ်တပ်များနဲ့ ရခိုင်အစွန်းရောက်များတို့က အင်အား ၅၀ နည်းပါးလောက်ရောက်လာပြီး ကျွဲထားပြင်ရွာကို တစ်အိမ်မကျန်မီးရှီု့လိုက်ပါတယ်
Views:9Mohd Araf
Views: 8 Mohd Araf
ROHINGYA women's and children's slaughters in BUTHIDAUNG khansama village group maung nu hamlet